Memphis Depay oo ka farxiyay taageerayaasha kooxda Liverpool… (Muxuu sameeyay?) – Gool FM
(Lyon) 26 Oct 2020. Kaddib markii uu gool ka dhaliyay kooxda AS Monaco kulan ka tirsan horyaalka Ligue 1, weeraryahanka kooxda Lyon ee Memphis Depay ayaa taageero badan u muujiyay naaqdiga Liverpool difaaceeda Virgil van Daijk.
Van Dijk ayaa dhaawac daran uu kasoo gaaray kulankii Mersyside Derby oo ay naadigiisa bareejo 2-2 ah la gashay naadiga Everton, waxaana uu garoommada ka maqnaan doonaa inta ugu badan xilli ciyaareedkan sida la filayo.
Balse waxa uu laacibkan taageero badan ka helayaa xiddigaha saaxiibbadiisa ah kuwaasoo kala tirsan naadiga Reds ama xulka qaranka Netherlands.
Depay oo ay difaacan ka wada tirsan yihiin xulka Holland ayaa caafimaad buuxa u rajeeyay Van Dijk, waxaana uu soo bandhigay qoraal ku xardhanaa funaanadda hoose oo u dhignaa: “Virgil, xoogeyso walaalkey”.
Xiddigii hore ee Manchester United ayaa funaanadda hoose soo bandhigay isagoo u dabaal dagayay gool uu ka dhaliyay kooxda Monaco, waxaana uu soo kabasho buuxda u rajeeyay kabtankiisa xulka qaranka Netherlands.